Horudhac: Manchester United vs West Ham United… (Aqriso rikoorrada iyo xaqiiqooyinka aad uga baahan tahay ciyaartan) – Gool FM
(Manchester) 22 Jan 2022. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kulan ciyaareed ka tirsan horyaalka Premier League maanta kula balansan naadiga West Ham United iyadoo Red Devils ka sari mari karta kooxda martida u ah maanta haddii ay ka guuleysato.
Man United ayaa haatan fadhisa kaalinta toddobaad ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska iyadoo leh 35 dhibcood, waxayna labo dhibcood oo qura ay u jirtaa Hammers oo kaalinta afaraad ku heysata 37 dhibcood inkastoo naadiga ugu hanashada badan horyaalkan ay heysato kulan baaqi ah.
Manchester United ayaanan heli doonin difaaceeda Victor Lindelof kaasoo la jabsaday gurigiisa, waxaa isna sidoo kale sababo shaqsi ah ku seegi doona ciyaartan Jadon Sancho, intaas kuma eka xiddigaha maqan ee Eric Bailly, Paul Pogba, Luke Shaw iyo Aaron Wan-Bissaka ayaa iyaguna maqnaan doona, balse nasiib wanaag waxaa taam buuxa ah Scott McTominay.
Dhinaca kale, West Ham ayaa akhbaar ka sugeysa waaxdeeda caafimaadka si loo hubiyo in Tomas Soucek iyo Kurt Zouma ay safan karaan kulankan, docda kale, Said Benrahma ayaa soo laaban kara maadaama xulkiisa Algeria laga soo reebay tartanka qarammada qaarada Afrika, balse Mark Noble mar kale dhaawac jilibka ah ku maqnaan doona.
West Ham ayaa guuleysatay kaliya toddobo ka mid ah 51-ka kulan ee ay Manchester United isku arkeen horyaalka Premier League.
Manchester United ayaa guuleysatay 20 ka mid ah 25 jeer oo ay Premier League garoonkeeda kula ciyaartay Hammers waana guuldarro la’aan 13 kii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka ee lagu ciyaaray Old Trafford tan iyo guuldarradii 1-0 ahayd ee bishii May sanadkii 2007.
Kaliya markii shanaad ayay Premier League ku kulmayaan West Ham oo ka sarreysa Manchester United jadwalka kala sarreynta horyaalka, hase ahaatee, Hammers waa ay ku hungowday inay xitaa mid ka mid ah kulammadaas guuleysato.
Manchester United ayaa heshay 115 gees ka laad (corner kick) xilli ciyaareedkan, balse waa kooxda kaliya ee aanan illaa iyo hadda gees ka laad gool ku dhalin horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan.
Dhinaca kale, ma jirto koox kaga goolal badan West Ham dhanka gees-ka-laadka goolasha laga helo tan iyo bilawgii 2020, waxayna ku dhalisay 24 gool.